Repoblika Demôkratikan'i Kôngô - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Repoblika Demôkratikan'i Kongo)
Ny Repoblika Demokratikan' i Kôngô dia firenena ao amin' ny faritr' i Afrika afovoany. Izy no firenena ao Afrika ngeza indrindra eo aorian' i Sodàna sy i Aljeria ; izy koa no firenena ngeza indrindra sy be mponina indrindra ao amin' ny faritr' i Afrika afovoany. Ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô no firenena be olona indrindra ao amin' ny fikambanan' ny firenena miteny frantsay eo alohan' i Frantsa. Iantsoana azy koa ny hoe Kôngô-Kinshasa mba tsy hifangaroany amin' i Kôngô-Brazzaville. I Kinshasa no renivohiny, avy eo no niavian' ilay anarana hoe Kôngô-Kinshasa. I Zaira koa no anaran' io firenena io tamin' ny 1971 hatramin' i 1997, teo izy niova Repoblika Demôkratikan' i Kôngô.
1.1 Talohan’ny fanjanahan-tany
1.1.3 Ny faharavan'ny Empira Londa
1.1.4 Fahazoan’ i Stanley fahefana feno tao Congo
1.2.2 Fananan’ i Belzika
1.3.2 Tsy fifanarahan’ ny mpitaky fahaleovan-tena
1.4 Ny fitondran’ i Kasavubu
1.4.2 Ny fisaraham-bazan’ i Katanga
1.4.3 Ny nahafatesan’ i Patrice Lumumba
1.4.4 Fitsaharan’ ny fisaraham-bazan’ i Katanga
1.4.5 Fitohizan’ ny fiokoan’ ireo mpomba an’ i Lumumba
1.5 Ny fitondran’ i Mobutu Sese Seko
1.5.1 Fanonganana an’ i Kasavubu sy fitondrana jadon’ i Mobutu
1.5.2 Nanamafy ny maha filoha azy tamin’ ny fifidianana i Mobutu
1.5.3 Fitontogan’ ny toekarena sy pôlitikan’ ny fitsitsiana
1.5.4 Fihozongozonan’ ny fitondran’ i Mobutu
Ny tantaran' ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô dia voamariky ny fisian' ny fisian'ny fanjakana maro madinidinika tany aloha, ny fahatongavan' ny Eorôpeana, ny fivarotana andevo, ny fanjanahan-tany belza, ny fahaleovan-tena, ny ady an-trano, ny fanonganam-panjakana, ny fitsabahan' ny firenena mpifanolo-bodirindrina, ary ny fizorana mankany amin' ny demôkrasia.
Talohan’ny fanjanahan-tany[hanova | hanova ny fango]
Efa nisy olona ity faritra ity tamin' ny 200 000 taona tal. J.K. Ny lemaka midadasika kôngôley tamin’ izany fotoana izany dia rakotry ny ala tsy nisy nanimba. Tany amin’ ny taonarivo faharoa dia nisy mpamboly banto, avy any amin' ny faritra eo anelanelan' ny tapany atsinanan' i Nizeria sy ny Grassfields any Kamerona, hatramin'ny 2600 tal. J.K., niditra tao amin’ io faritra io ka niorim-ponenana amin’ ny morontsiraka sy teny amin’ ny lembalemba atsinanana sy atsimo, ka teny izy ireo no nanangana fiarahamonina tarihin’ ny lehibem-poko.
Nisy ny fanjakam-panjaka niorina koa teo anelanelan'ireo taonjato voalohany taor. J.K. sy ny taonjato faha-15, ka ny lehibe indrindra amin'ireo dia ny fanjakan' i Loba (Luba) sy ny fanjakan' i Londa (Lunda) ary ny fanjakan' i Kôngô (Kongo). Tamin’ ny taona 1482 dia nifandray voalohany tamin’ ny fanjaka-mpanjaka banto tao Kôngô (Kongo) ny Pôrtogey.
Nanao ampihi-mamba ny fivarotana fingotra sy vangin’ elefanta ilay Fanjakana Afak’ i Congo (Etat libre du Congo). Nandroso ny fitaterana entana amin’ ny alalan’ ny filanjana. Tamin’ ny taona 1897 dia nampidirina tao amin’ io faritra io ny asa an-tery vozona. Izany fanararaotana izany, sy ny taham-pahafatesana mbony nateraky ny filanjana entana, dia nampihetsi-po ny mpanara-baovao, ka nisy ny fampielezan-kevitra avy ao amin’ ny Fanjakana Mitambatra (Britaina Lehibe) izay nanameloka izany fanararaotana nataon’ ny fitondran’ i Léopold II izany.
Ny fitondran’ i Kasavubu[hanova | hanova ny fango]
Ny nahafatesan’ i Patrice Lumumba[hanova | hanova ny fango]
Fitohizan’ ny fiokoan’ ireo mpomba an’ i Lumumba[hanova | hanova ny fango]
Fanonganana an’ i Kasavubu sy fitondrana jadon’ i Mobutu[hanova | hanova ny fango]
Ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô dia manana velaran-tany mirefy 2 344 885 km². Ao anaty lempona midadasika no misy azy dia ny lemaky ny ony Congo nahazoany io anaray io. Ny rano indray dia harena voa-janahary lehibe ho an’ny Repoblika Demôkratikan’i Kôngô, izay manana otri-kerin’aratra avy amin’ny rano lehibe indrindra maneran-tany.
Ity ony ity no mampiray an’ io firenena io noho ny fananany lemaka midadasika mirefy 3 820 000 km². Marin-toerana ny hadirin-drano entiny noho ny fitsimbadihan’ ny fotoan’ny orana ao amin’ ireo faritra avaratra sy atsimon’ ny fehiben-tany. I Oubangui, izay sampan-drano mamatsy azy, dia mipoitra avy ao amin’ ny faritra avaratra, fa izy tenany sy ireo sampan-drano hafa mamatsy azy dia mipoitra avy ao amin’ ny faritra be fatrana ao atsimo. Ao amin’ ny faritra atsimo atsinanana dia mamakivaky lembalemba avo mikintoana maro i Congo alohan’ ny hanamoronany ny lembalemba Bateke. Ny sisin’ ny lempona avaratra dia misolampy mianambony ka mamorona ny lembalemban’ i Shaba (na lembalemban’ i Katanga) any amin’ ny 1 220 m ambonin’ ny ranomasina, izay mitohy amin’ ny tangoron-tendrombohitr’ i Mitumba sy ny an’ i Kundelungun.
Ao atsinanana no mipoitra ireo kitoantoana foronin’ny afotroa (volokano) vokatry ny fahavakisan’ny Rift Valley, ao amin’ny faritry ny Farihy Lehibe. Ao no ahitana ireo tendrombohitra avo indrindra ao Kôngô, dia i Karisimbi (4 507 m), i Mikeno (4 437 m), i Nyaragongo (3 470 m), ao amin’ny tangorom-bohitry ny afotroa Virunga, i Ruwenzori, ny “tendrombohitry ny Volana”, izay mahatratra 5 119 m ao amin’ny tendro Marguerite.
Ireo havoanan’i Kivu ao atsinanana, izay tany misolampy tohin’ny tangoron-tendrombohitra an-dranomasin’i Congo-Nily, dia matetika rakotra ahi-maitso ary ny nofon-taniny avy amin’ny afotroa dia lonaka ka mety amin’ny fambolena. Any ambanimbay any dia hitana alam-pehibe midadasika sy mikitroka izay mandrakotra ireo faritra atsinanana sy avaratra atsinanana. Ny ala midadasik’i Ituri dia mivelatra avy any amin’ ny fihaonan’ i Congo sy i Aruwimi ao amin’ ny farihy Albert sady mandrakotra veleran-tany manakaiky ny 65 000 km². Izany ala izany no faritra farany onenan’ ireo Pigmea. Maro ireo karazan-kazo ahazoana fingotra sy ireo palmie fanamboara-menaka izay volen’ny mponina ao amin’ io faritra io, hita ao koa ny kafe sy ny hasy (na landihazo), ny akondro ary ny voanio. Rakotry ny fatraa ireo faritra avo indrindra manamorona ny lemak' i Congo.
Betsaka ny karazam-biby sy vorona. Ao ireo karazam-biby atahorana ho lany tamingana toy ny gorilin-tendrombohitra ao amin’ireo Virunga, ny elefanta, ary koa ireo biby mampinono lehibe toy ny liona, ny leôparda, ny jirafa, ny lalomena, ny ôkapy, ny zebra ary ny bofalô. Ny biby mandady sy mikisaka koa dia hita ao koa, isan’izany ny bibilava pitôna, ny voay. Hita ao koa ny vorona samihafa toy ny boloky, ny sama, ny karazan-takatra. Ny toetany mando dia mampitombo isa ny bibikely, ka isa’izany ny moka anôfela izay mitondra ny kantsentsitry ny tazomoka, ny lalitra tsetse miaina eny amin’ ny tany lemaka izay mamindra ny aretin’ ny torimaso.
Ny Repoblika Demôkratikan’i Kôngô dia ahitana vondrom-poko fito sy zana-poko mihoatra ny telonjato. Ny vondrona lehibe indrindra dia vondrona banto: ny Kôngô (Kongo), ny Bateke (Bateke), ny Loba (Luba), ny Londa (Lunda) ary ny Koba (Kuba). Ao avaratra no ahitana ny Nilôtika sy ny Pigmea (izay monina any amin’ ny faritra be ala).
Harena an-kibon’ny tany sy taozava-baventy[hanova | hanova ny fango]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Repoblika_Demôkratikan%27i_Kôngô&oldid=1001390"
Voaova farany tamin'ny 16 Febroary 2021 amin'ny 01:03 ity pejy ity.